Miaka-peo Manohitra Ny Lalàna Henjana “Miady Amin’ny Fampihorohoroana” Ny Orinasa Sy Ireo Mpikatroka Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jolay 2016 9:00 GMT
“Manohitra ny fanarahamaso aho!” Sombiny tamin'ny sora-baventy antserasera tamin'ny hetsika RosKomSvoboda manohitra ny lalàna vaovao “miady amin'ny fampihorohoroana” izay mampitombo ny fanarahamaso ny fifandraisana antserasera sy mandrahona ny fanafenantsoratra.
Manao antso fanairana ny mpikatroka sivika Rosiana sy ny orinasan'ny aterineto manoloana ireo fanitsiana andian-dalàna vaovao “anti-terorista” izay efa nandalo fandinihana voalohany tao amin'ny Antenimiera Rosiana. Nilaza ireo manohitra ny fanitsiana manontolo fa loza mitatao goavana ho an'ny fahalalaham-pitenenana sy ny fanehoan-kevitra amin'ny aterineto sy ivelan'ny aterineto ireo lalàna vaovao, satria manome fahefana ho an'ny governemanta sy ny fampiharana ny lalàna mba hanenjika ny fifandraisana voaaro sy hanamafy ireo fepetra fanarahamaso efa misy.
Norafetan'ilay mpanao lalàna Irina Yarovaya sy ny Senatera Ozerov Viktor ireo lalàna “anti-terorista” vaovao, ary fantatra fa nodinihana fanindroany sy fanintelony tamin'ny 22 Jiona, saingy nahemotra tamin'ny Zoma 24 Jona ny latsa-bato. Mitatitra ny Meduza, tranonkalam-baovao mpanaramaso an'i Rosia fa hisy fiantraikany amin'ireo lalàna folo samihafa ny fanitsiana ary hanitatra ny fahefan'ny fanjakana amin'ny ankapobeny hifehezana ny olom-pireneny sy hametra ny zo sivilin'izy ireo.
If the legislation is approved (which is almost certain), Russia's authorities will gain the power to strip Russians of their citizenship, revoke the foreign travel rights of people convicted of reposting certain “wrong” content online, and access every single telephone conversation and email that crosses Russia's telecommunications lines.
Raha lany ny lalàna (izay azo antoka fa mety ho lany), hahazo fahefana hanatsoaka ny maha-olom-pirenena Rosiana ny manam-pahefana ao Rosia, ary hanafoana ny zon'ireo olona voampanga amin'ny famoahana votoaty antserasera “diso” tsy hivezivezy any ampitan-tsisintany, ary hiditra amin'ny resaka an-tariby sy ny mailaka tsirairay mandalo ny zotram-pifandraisandavitra ao Rosia.
Famerana fanampiny amin'ny fahalalahan'ny aterineto
Anisan'ireo fepetra marobe ikendrena hanalefaka amin'ny fampihorohoroana sy ny fihetsika mahery ao Rosia ny fanitsiana naroso hampitomboana ny sazy amin'ny mpiserasera “mandrisika hetsika fampihorohoroana sy manamarina ny fampihorohoroana,” mampitombo ny sazy farany ambony indrindra 5 ho 7 taona amin'izany fanitsakitsahana.
Fepetra iray hafa mampiahiahy niteraka fanairana lehibe eo amin'ny sehatry ny fahalalahan'ny aterineto Rosiana ny fenitra mandidy ny orinasan'ny fifandraisan-davitra hitahiry ny metadata (tahiry mpandrakitra tahiry) sy ny fifandraisan'ny mpiserasera nandritra ny enimbolana ao amin'ny tany Rosiana. Tsy maintsy mitahiry ny fandraketana ireo antso an-tariby na tahirim-peo, hafatra an-tsoratra, sary, lahatsary, sy votoaty karazany hafa ireo mpamatsy fifandraisana sy ireo mpikarakara ny “fizaràna ny vaovao antserasera,” tahaka ny sehatra famahanana bilaogy sy ny tranonkala tambajotra sosialy.
Takiana ihany koa ireo orinasan'ny fifandraisandavitra sy ny mpamatsy tolotra aterineto mba hitahiry ny metadata rehetra avy amin'ny hafatra nalefa na voaray eo amin'ireo mpiserasera (toy ny fampahafantarana ny fotoana nifanakalozan-kevitra, ny mombamomba ny mpandefa sy ny mpandray vaovao, ny fangitry ny tahiry, sns) mandritra ny telo taona. Tsy maintsy azon'ny mpampihatra lalàna Rosiana jerena izany tahiry rehetra izany raha mitaky izany ny sampan-draharahany noho ny asa fanadihadiana. Raha lany ho lalàna, dia hanan-kery manomboka amin'ny Jolay 2018 ireo fepetra ireo.
Taorian'ny fandinihana voalohany ny volavolam-panitsiana, nanampy fenitra hafa tamin'ny lalàna ireo mpanao lalàna: nanome soso-kevitra izy ireo mba hametra ny fanafenantsoratra amin'ny tahiry antserasera amin'ny alalan'ny fitakiana amin'ny orinasan'ny aterineto sy ny Telecom izay mampiasa fanafenantsoratra amin'ny fifandraisan'ny mpiserasera (toy ny fanafenantsoratra eo am-piaingana sy eo am-pahatongavan'ny hafatra na ny arifenitra HTTPS amin'ny tranonkala) mba hanome ny teny miafian'ny fanafenantsoratr'izy ireo ho azon'ny Sampam-piarovana Federaly ao Rosia hojerena mba hahafahan'izy ireo mahita ny fifandraisana. Mety ho voasazy handoa onitra hatramin'ny iray tapitrisa robla (15.000 dolara) ny orinasa izay mandà tsy hanome ny lakilem-panalana fanafenantsoratra.
Fanoheran'ny fiarahamonina sy ny orinasa
Nanao fanentanana manohitra ny fitomboan'ny fepetra fanarahamaso ao anatin'ny volavolan-dalàna ireo mpiaro ny fahalalahana maneho hevitra Rosiana, ary nilaza fa ny famerana vaovao amin'ny fanafenantsoratra dia mahatonga ny lalàna ho “mampidi-doza bebe kokoa.” Nanatontosa fanentanana antserasera “Tsy Mila Fanarahamaso” tamin'ny alalan'ny fananganana tranonkala iray antsoina hoe 1984.live tamin'ny fotoana nanaovana ny fandinihana voalohany ny lalàna vaovao ny RosKomSvoboda, fikambanana miaro ny fahalalahan'ny aterineto mikambana ao amin'ny Antoko Piraty ao Rosia. Nanaraka avy eo ny fanentanana amin'ny media sosialy mivantana amin'ny manampahefanan'ny governemanta, mangataka azy ireo hanafoana ny fanitsiana. Nahaangona sonia maherin'ny 3.000 ny RosKomSvoboda tamin'ny fanangonan-tsonia manohitra ny lalàna nalefan'izy ireo tao amin'ny Duma [Antenimiera] Rosiana sy ny Minisiteran'ny Fifandraisana tamin'ny 21 Jiona, alohan'ny fandinihana fanindroany ny volavolan-dalàna.
Olom-pirenena maherin'ny 3 arivo avy amin'ny faritra 79 ao Rosia no nanasonia ny [fanangonan-tsonia] manohitra ny volavolan-dalàna Yarovaya-Ozerov.
Naneho ny ahiahin'izy ireo momba ny lalàna vaovao ihany koa ireo solontenan'ny orinasa ao Rosia. Nilaza tamin'ny tranonkalam-baovao RBC ny mpitondratenin'ny Goavan'ny Aterineto Yandex fa “hitarika fitomboan'ny fandaniana eo amin'ireo orinasan'ny aterineto, ary hanakely loatra ny zon'ny orinasa sy ny mpiserasera” ny fepetra takiana amin'ny fitehirizana ny lahatahirin'ny mpiserasera sy ny fepetra iezahana hanalefahana ny fanafenantsoratra.